Maxay tahay sababta Maqalka Ka-baxsan Guriga (AOOH) uu gacan uga geysan karo ka-beddelka Ku-siyada Qolalka Saddexaad | Martech Zone
Maxay tahay sababta Maqalka Ka-baxsan Guriga (AOOH) uu gacan uga geysan karo ka-beddelka Ku-siyada Qolalka Saddexaad
Talaado, Maarso 8, 2022 Talaado, Maarso 8, 2022 Paul Brenner
Waxaan ogaanay in muddo ah in weelka buskudka ee qolo saddexaad aanu dhergi doonin muddo dheer. Koodhadhkaas yar yar ee ku dhex nool daalacashadayadu waxay awood u leeyihiin inay qaadaan xog badan oo shakhsi ah. Waxay awood u siinayaan suuqgeyneyaasha inay la socdaan dabeecadaha khadka ee dadka oo ay ka helaan faham wanaagsan oo ku saabsan macaamiisha hadda iyo kuwa suurtagalka ah ee booqanaya mareegaha caanka ah. Waxay kaloo caawiyaan suuqleyda - iyo celceliska isticmaalayaasha internetka - si hufan oo hufan u maareeyaan warbaahinta.
Haddaba, waa maxay dhibku? Fikradda ka dhalatay cookies-ka qolo saddexaad waxay ahayd mid wanaagsan, laakiin welwelka xogta gaarka ah awgeed, waa waqtigii isbeddelka ilaalin lahaa macluumaadka macaamiisha. Gudaha Mareykanka, cookies-ka ayaa wali ah ka bixida halkii ay ka ahaan lahayd gaabsi. Sababtoo ah kukisku waxay ururiyaan xogta daalacashada, milkiilayaasha mareegaha sidoo kale waxay ka iibin karaan xogtaas qolo kale oo kale, sida xayeysiiye. Qolo saddexaad oo aan damiir lahayn oo iibsaday (ama xaday) cookies xogta waxay u isticmaali karaan macluumaadkaas si aan fiicneyn inay galaan dambiyo kale oo internetka ah.
Suuqgeeyayaashu waxay mar hore bilaabeen inay ka fikiraan sida ikhtiyaarada xayaysiisyada dhijitaalka ah ay isu bedeli doonaan marka weelka buskudka uu faaruqiyo. Sidee suuqleydu si wax ku ool ah ula socon doonaan dhaqanka? Sidee bay si guul leh ugu adeegi doonaan xayeysiiska khuseeya dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah? leh Maqal-ka-baxa Guriga (AOOH), suuqleydu waxay isticmaalaan sifo si ay u qiimeeyaan qiimaha ama ROI ee kanaalada isku xira summadaha macaamiisha mustaqbalka.
Nasiib wanaag, waxaa jira xeelado suuq-geyneed hoose oo kala duwan oo maanta la isticmaalo kuwaaso kasban doona quseeya adduunka kukiyada kadib. Warshadaha suuqgeyntu waxay wali sahamiyaan sida mustaqbalka ku tiirsanaanta cookie-la'aanta ee xayeysiisyada la beegsaday ay u ekaan doonto. Waxaan wali haysan doonaa cookies-ka qaybta koowaad oo uu soo saaray bogga martida loo yahay si loo ururiyo falanqaynta milkiilayaasha mareegaha. Calaamaduhu waxay ka faa'iidaysan karaan xayeysiiska ku salaysan macnaha guud, diiradda saaraya shakhsiyaynta, iyo bartilmaameedka dhagaystayaasha iyadoo lagu saleynayo goobta iyo wakhtiga.
Kukiyada kooxda kowaad maaha xalka kaliya ee ururinta iyo dhisidda macluumaadka macaamiisha si loo horumariyo ololayaasha xayaysiinta ee la beegsaday, si kastaba ha ahaatee. Suuqgeeyayaasha iyo summadaha waxay isticmaalaan xeelad kale oo waxtar leh: Maqal-ka-baxa Guriga.
Shakhsiyeynta La'aanta Duulaanka Qarsoonida
Fikrad cusub oo ah in lagu daro xayaysiimaha maqalka ee la beegsaday dukaamada, AOOH waxay isku daraysaa jawiga wax iibsiga iyo walxaha suuqgeynta maqalka. Marka lagu daro xayeysiisyadan goobta suuqa AOOH ee barnaamijka ah, suuqleydu waxay maqli karaan dhaqdhaqaaqyada hoose ee hoose sida iibsadaan, sale, coupon si loo gaaro macaamiisha dhamaadka safarka wax iibsiga.
Noocyada waxay u isticmaalayaan AOOH waayo-aragnimada macmiilka ee ugu waxtarka badan ee dukaanka dhexdiisa ah, baahinta xayaysiisyada barnaamijka si toos ah u dukaamaysiga ku hawlan, saamaynaya go'aamada wax iibsiga isla marka la iibsanayo.
Ku darida AOOH sida meel iyo dalacsiin Isku-dhafka suuq-geynta dhexdeeda wuxuu bixiyaa fursad weyn oo lagu fududeynayo kala-guurka ka baxsan cookies-ka dhinac saddexaad, gaar ahaan shakhsiyeynta iyo xogta ayaa fure u ah guusha ololaha xayaysiinta sanadka soo socda. Noocyada iyo waaxyadoodu waxay u baahan yihiin inay ka fikiraan meel ka baxsan sanduuqa oo ay isticmaalaan dhexdhexaad aad loo bartilmaameedsado oo loogu talagalay inay bixiso khibrado gaar ah, oo la gaaryeelay dukaameeyayaasha.
Farsamada AOOH uma baahna xogta shakhsiyeed si ay si hufan ugu shaqeyso. Waxay taageertaa xayaysiis guud iyo xalal barnaamij - iyo halkii ay macdanta ka soo saari lahayd xogta dukaamada gaarka ah, waxay diiradda saartaa khibrada macaamiisha ee dukaanka.
Dhexdhexaadiyaha AOOH waxa uu gaaraa qof kasta oo wax ka iibsada meel leben-iyo-hoobiye ah. Loogu talagalay isticmaalka dadban, weligeed looguma talagelin inay noqoto kanaalka warbaahineed ee mid-ka-mid ah. Uma baahnid inaad ka walwasho arrin gurguurta la joog cookies-ka qolo saddexaad sababtoo ah AOOH waxay ku salaysan tahay goobta, ma qalab gaar ah. Shaqsiyaadka wax iibsanaya iyo dabeecadaha lagama soo minguurin xogta shakhsi ahaaneed. Waxay u ogolaataa suuq-geeyayaasha inay qiimeeyaan oo ay keenaan khibradaha dukaanka dhexdiisa ee shakhsi ahaaneed iyagoo raacaya sharciga sirta.
Marka laga eego dhinaca barnaamijka, AOOH had iyo jeer waa diyaar oo waa diyaar. Iyadoo ay wali ku tiirsan tahay Platform-ka-Dalbashada (Demand-Side Platforms)DSPs) si loo beegsado daawadayaasha, AOOH waxay kab ka dhigtaa dunidu dhawaan-u noqon doonto cookie-la'aanta iyada oo la beegsanayo goobta iyo bar-tilmaameedka alaabta. Waa waqtigii ugu fiicnaa ee AOOH ay kordhin lahayd joogitaankeeda goobta barnaamijka iyo iibsadaha si ay uga faa'iideystaan ​​deegaanka aan ku jirno.
AOOH Waxay Siisay Suuqgeeyayaasha Faa'iido
Adduunyada buskudka ee xisbiga saddexaad, noocyada adeegsada AOOH waxay heli doonaan faa'iido. Halka xogta dhinac saddexaad falaa waxay soo saartaa macluumaad aad u tiro badan oo ku saabsan hab-dhaqanka macaamilka, waxay sidaas ku samaysaa iyada oo la soconaysa dhammaan taarikhda wax baadhista ee isticmaalayaasha intarneedka. Sida xogta kooxda koowaad, oo ururisa macluumaadka dhismaha xidhiidhka, AOOH waxay siisaa fursadda ugu habboon ee lagu kobcinayo daacadnimada summada iyo kalsoonida macaamiisha.
Kukiyada kooxda saddexaad waxaa loo sameeyay sidii qalab si ay u caawiyaan summadaha inay fahmaan macaamiishooda, ururinta fikradaha xogta la ururiyay si ay u bixiyaan tan ugu shaqsiyeysan, khibrada xayeysiiska ee la beegsaday. La'aanta kormeer joogto ah oo ay weheliso koror la taaban karo oo ku yimid xogta la ururiyay oo lagu daray niyad-jabka macaamiisha iyada oo la raacayo inta ay le'eg tahay inta noocyada macluumaadka shakhsiyeed ay ururin karaan iyaga oo aan oggolaansho cad laga helin.
AOOH wali waa la shaqsiyeeyay laakiin ma khiyaameeyo aaminaadda astaanta. Sababtoo ah waa xalka waayo-aragnimada maqalka ee ku salaysan goobta, AOOH waxay bixisaa fursad gaar ah oo lagu dhamaystiro fariimaha kale ee la gaaryeelay sida xayaysiisyada mobaylada ama calaamadaynta aduunka jirka. Waxay si aan kala go 'lahayn ugu dhex milmay deegaanka macaamiisha - waxayna si fiican u taagan tahay inay ka ciyaarto door hoggaamineed oo guul leh ololayaasha xayaysiisyada sanadka soo socda.
Markaan ku sii jirno 2022, xayeysiisyada barnaamijku waxay sii wadaan inay bartaan oo ay horumariyaan. Faafida ayaa kicisay miisaaniyada barnaamijka, iyo baahida kordhaysa ee dabacsanaanta ayaa sii wadi doonta sii hurinta dardargelintaas. Dhab ahaan…
Celceliska miisaaniyada barnaamijka 2022 ee $100 bilyan waxay horseedi doontaa kor u kac aad u weyn oo macaamiisha ah oo wax ka iibsanaya alaabta muhiimka ah ee dukaanka dhexdiisa.
Isbeddellada Xayeysiiska Barnaamijyada, Tirakoobka, & Wararka
COVID-19 wuxuu gacan ka geystay kicinta kobaca maqalka, labadaba muusiga qulqulaya iyo podcasts. Sannadka 2022, waxaanu macaamiisha ku soo jiidanaynaa fariimaha hal-abuurka leh iyo macnaha guud ee jawiga wax iibsiga iyada oo loo sii marayo AOOH. Waa markii la wacdiyi lahaa qiimaha AOOH oo lagu bari lahaa xayaysiiyayaasha iyo suuqgayaga saamaynta tooska ah ee ay ku leedahay iibinta alaabta.
Akhri wax ku saabsan Vibenomics La xidhiidh Vibenomics
Tags: aooh advertisingdhacaaudiomaqal guriga ka baxsanxayaysiis maqal ah oo guriga ka baxsanxayaysiis ku salaysan macnaha guudbuskud la'aanDSPcodka goobta ku salaysanooh advertisingguriga ka baxsanshakhsi ahaaneedcookie kadibcookies saddexaadvibenomics
Isaga oo in ka badan 25 sano oo waayo-aragnimo ah u leh warbaahinta & madadaalada iyo hoggaanka tignoolajiyada, Paul Brenner waxa uu ka soo shaqeeyay doorar badan oo c-suite ah, oo ay ku jiraan Madaxa Qaybta ee Shirkadda Hawlgelinta Emmis. Isaga oo ah Madaxweynaha NextRadio/TagStation, shaqadiisu waxay diiradda saartay hal-abuurnimada caalamiga ah iyada oo loo marayo hawlgelinta FM Chip ee dhammaan taleefannada casriga ah ee cabbiraadda dhegeystaha, waayo-aragnimada isticmaale ee baabuurka la wanaajiyey, iyo aaladaha xogta xogta ee dhammaan raadiyaha baahinta. 2019, Paul ayaa ku biiray Vibenomics Isaga oo ah Sarkaalka Sare ee Istaraatiijiyadda si uu gacan uga geysto horumarinta istaraatiijiyada suuqa-ka-soo-baxa ee shirkadda xal-u-helka xayeysiiska Maqal-ka-baxsan-ka-baxsan ee shirkadda. Ka dib markii si guul leh loo daahfuray, Brenner waxaa loo dalacsiiyay Madaxweynaha Audio OOH si uu u kormeero dhammaan dadaallada ku xeeran dhaqdhaqaaqa dakhli-abuurista iyo iskaashiga la xidhiidha oo dhawaan ku biiray Guddiga Cilmi-baarista DPAA iyo Guddiga cusub ee Warbaahinta Tafaariiqda IAB.
Mareegta Elementor Cloud: Ka Dhis Elementorkaaga Bogga WordPress ee Martigelinta Go'an ee Si Buuxda Loo Taageero
Isticmaal jQuery si aad u dhageysato oo aad uga gudubto Dabagalka Dhacdada Google Analytics ee Dhagsi kasta